आठराई विमानस्थलः प्रधानमन्त्रीको सपना, रवीन्द्र अधिकारीको सम्झना « Mechipost.com
आठराई विमानस्थलः प्रधानमन्त्रीको सपना, रवीन्द्र अधिकारीको सम्झना
प्रकाशित मिति: २५ कार्तिक २०७६, सोमबार १८:१३
आठराईको चुहानडाँडामा विमानस्थल निर्माण गरिने क्षेत्र ।
फिदिम, २० कात्तिक
आठराई गाँउपालिका–६ चुहानडाँडामा विमानस्थल निर्माण हुने भएपछि स्थानीयवासीमा खुसियाली छ । अरु पूर्वाधार निर्माण भएपछि विमानस्थल बन्न लागेको होइन्, यहाँ । बरु सडक बाहेकका पूर्वाधार नभएपनि विमानस्थल बन्ने सुनिश्चितताले यो सुन्दर पहाडको पुनर्जीवनको आशा पलाएको मात्रै हो । तेह्रथुम सदरमुकाम म्याङलुङबाट ६५ किलोमिटरको दुरीमा रहेको यो दुर्गम गाँउपालिका पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्ग निर्माण भएपछि छिमेकी जिल्ला पाँचथरसँग कालोपत्रे सडकले जोडियो । तर जिल्ला सदरमुकाम पुग्ने बाटो अझै कालोपत्रे भइसकेको छैन । विद्युत, खानेपानी र सिंचाईको अभाव पनि छ ।
पञ्चायत कालदेखि विमानस्थलको चर्चा भएपनि निर्माण कार्य अघि नबढेको यहाँ अहिले निर्माण प्रकृयाले मूर्त रुप लिन लाग्दा स्थानीयवासी दङ्ग छन् । चुहानडाँडामा विमानस्थल निर्माणका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनिसकेको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका लागि बोलपत्र आव्हान पनि भइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि रु. २५ करोड बजेट पनि छुट्टिएको छ । तर अहिले विमानस्थल भन्नेवित्तिकै हाँसो र आशुको संयोग पर्छ ।
यही विमानस्थलको अनुगमनका लागि आउनुभएका तत्कालीन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्ययन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको गत फागुन १५ गते ताप्लेजुङमा दुर्घटनामा परी निधन भयो । सरोकार समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रम तथा विमानस्थल निर्माण क्षेत्रको अनुगमन नै दिवङ्गत अधिकारीको अन्तिम कार्यक्रम रह्यो ।
आठराई गाँउपालिकामै पर्ने इवा पुख्र्यौली घर रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विशेष चासो देखाउनुभएको यो विमानस्थलसँग अधिकारीको निधन पनि जोडिएपछि खुसी र आँशुको संयोग भएको सरोकार समितिका सचिव रामचन्द्र थपलियाको भनाई छ । “हामी त खुसीमा रमाइरहेका थियौँ । हाम्रो खुसीलाई सार्थक तुल्याउन आउनुभएका यो देशको आशाको एक धरोहरलाई गुमाउनु पर्दा हामीसँग पीडा थपिएको छ” थपलियाले भन्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यहाँ विमानस्थल निर्माणका लागि विशेष चासो देखाउनुभएको केही समयअघि स्थलगत निरीक्षणका लागि आइपुग्नु भएका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्ययन मन्त्री योगेश भट्टराईको भनाईबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । “चाँडो भन्दा चाँडो यहाँ विमानस्थल बनेको हेर्ने प्रधानमन्त्री ज्यूको उत्कट चाहना छ” मन्त्री भट्टराईले भन्नुभयो “मेरा मित्र तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्ययन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको निधनले पनि यो विमानस्थल निर्माणको कार्य चाँडो सुरु गरेर निर्धारित समयमै पूरा गर्नुपर्ने दबाव समेत छ ।”
प्रधानमन्त्री ओलीलाई उहाँ दोश्रो पटक प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि आठराईवासीले दुई पटक भेटेर छिटो निर्माण कार्य सुरु गर्न दबाव दिइसकेका थिए । “प्रधानमन्त्री ज्यूले विमानस्थल बन्नेमा द्विविधा रहेन् । छिटो काम सुरु गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्नुभएबाट हामीले विमानस्थल बन्नेमा विश्वस्त भएका हौँ” सरोकार समितिका अध्यक्ष एवं प्रदेश नं. १ का प्रदेश सभा सदस्य तेजमान कन्दङ्वाले भन्नुभयो ।
नागरिक उड्ड्ययन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलका अनुशार आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा आठराई विमानस्थलको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ । यहाँ विमानस्थल निर्माणका लागि विहीवार मात्रै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन कार्यका लागि बोलपत्र आव्हानको सूचना प्रकाशित भएको छ ।
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा ९२७ मिटर लम्बाईको धावन मार्ग निर्माण गर्ने, विमानस्थलका लागि ४४८ रोपनी जग्गा आवश्यक पर्ने उल्लेख छ । विमानस्थल निर्माणका लागि रु. ८५ करोडको लागत आवश्यक हुने प्रतिवेदनले देखाएको छ । विमानस्थल निर्माणबाट यहाँका १४ घर परिवार विस्थापित हुने सरोकार समितिका सचिव थपलियाले जानकारी दिनुभयो ।
थप जग्गाको प्रवन्ध गर्न आग्रह
दुइ हप्ताअघि विमानस्थल निर्माण हुने क्षेत्रको स्थलगत अवलोकनमा आउनुभएका मन्त्री भट्टराईले विमानस्थल निर्माणका लागि जग्गा पर्याप्त नभएकाले थप जग्गा उपलब्ध गराएर सहयोग गर्न स्थानीयवासीलाई आग्रह गर्नुभयो । “विमानस्थल निर्माणमा थप जमिन आवश्यक छ । यहाँहरु धनी हुनुहुन्छ । मलाई विश्वास छ यहाँहरुले आवश्यक जग्गाको प्रवन्ध गर्नुहुनेछ” मन्त्री भट्टराईले भन्नुभयो । मन्त्री भट्टराईले चालु आर्थिक वर्ष भित्रै विमानस्थल निर्माणको कार्य सुरु हुने विश्वास समेत ब्यक्त गर्नुभयो ।
यहाँ विमानस्थल निर्माण हुनसके आठराई क्षेत्रको मुहार फेरिने आठराई गाँउपालिकाकी उपाध्यक्ष रुपा कन्दङ्वाको विश्वास छ । “विमानस्थलले अरु पूर्वाधारहरुको पनि सुनिश्चितता गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ” उपाध्यक्ष कन्दङ्वाले भन्नुभयो “ब्यापारिक चहल पहल पनि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।” स्थानीयवासी कृष्णप्रसाद ओली विमानस्थल निर्माणले आठराईले बाहिर चर्चा भएजस्तै स्थानमा पुर्याउने विश्वास ब्यक्त गर्दै चाँडो निर्माण कार्य सुरु हुनुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ ।
आठराईमा विमानस्थल निर्माण हुनसके तेह्रथुम जिल्लाका अतिरिक्त पाँचथर र ताप्लेजुङका स्थानीयले लाभ लिन सक्छन । पाँचथर सदरमुकाम फिदिमबाट यहाँ पुग्न करीब ४५ मिनेट समय लाग्दछ । कालोपत्रे सडक निर्माणमा भइसकेपछि तेह्रथुमको म्याङलुङबाट करीब डेढ घण्टामा आठराई पुग्न सकिन्छ । यस्तै निर्माणाधीन तमोर कोरिडोर पूर्ण भएपछि ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङलिङबाट करीब डेढ घण्टामा यहाँ पुग्न सकिन्छ ।
तीन जिल्लाको केन्द्र विन्दूमा रहेकाले आठराई विमानस्थल निर्माण हुनेमा शंका नरहेको भन्दै मन्त्री भट्टराईले स्थानीयवासीलाई आश्वस्त तुल्याउनुभएको छ । “यसै वर्ष निर्माण सुरु गर्न सकियो भने कम्तिमा तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुन्छ” मन्त्री भट्टराईले भन्नुभयो ।